Tuscany Poggio Al Tuffo IL Tintorosso IGT Organic 2018 (TW60146) ~ ICT.com.mm
HomeTuscany Poggio Al Tuffo IL Tintorosso IGT Organic 2018 (TW60146)
Tuscany Poggio Al Tuffo IL Tintorosso IGT Organic 2018 (TW60146)
Origin: Pitgliano, Maremma Toscana – Grosseto Grapes: Sangiovese, Merlot Alcohol: 13% Format: 0.75l Ideal consumption: 2017/2019 Serving temperature: 16/18 ° C Moment to taste it: Dinner with friends Tannic rating : 8/10... [Learn more]
Origin: Pitgliano, Maremma Toscana – Grosseto
Tannic rating : 8/10
Pairings: Meat appetizers, fresh cheeses, fish first courses, cold cuts
အီတလီနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော် ဝိုင်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ‘Poggio al Tufo’ မှ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Tuscany Poggio Al Tuffo IL Tintorosso IGT Organic (2018) ဝိုင်နီ ဖြစ်ပါတယ်။ အီတလီနိုင်ငံ Tuscany ဒေသမှာ စိုက်ပျိုးထားတဲ့ ဝိုင်စပျစ်စိုက်ခင်းတွေကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး အဓိကကုန်ကြမ်းအနေနဲ့ ‘The Blood of Jupiter’ လို့လူသိများတဲ့ ‘Sangiovese’ စပျစ်နဲ့ ပြင်သစ်ဝိုင်နီစပျစ်ဖြစ်တဲ့ ‘Merlot’ စပျစ်တို့ကို ရောစပ်အသုံးပြုထားပါတယ်။ Alcohol ပါဝင်မှု 13% ရှိပြီး Red – Bold and Structured စတိုင် ဝိုင်နီအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အသားဟင်းလျာအမျိုးမျိုး၊ ချိစ်အမျိုးမျိုးနဲ့ ငါးဟင်းလျာအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့် တွဲဖက်သုံးဆောင်လေ့ရှိတဲ့ အီတလီဝိုင်နီ ဖြစ်ပါတယ်။
Tasting notes: Intense bouquet of mature red berries fruits. Pleasing floral notes, including the violet. Well-balanced with good structure and nice length with fruity flavors. The palate is dry with good acidity and freshness. Full-bodied, the tannins are well balanced. Overall harmonic and persistent taste, nice and easy to drink
Recommended with: savory first courses, cured meats and fresh cheeses